Mpigadra mahazatra voafonja efa nigadra rafitra voafonja Corridor Telephone -JWAT133, China Mpigadra efa antitra efa nigadra System fonja Corridor Telephone -JWAT133 Mpanamboatra, mpamatsy, Factory - Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Eto ianao : Home>Product>Fonjazana
Mpigadra mahazatra voafonja efa nigadra System fonja Corridor Telephone -JWAT133
Ity Telephone ity dia mijanona ao anaty fitaovana vy tsy misy fangarony SUS304 ary amboarina amin'ny fenitra avo lenta, manolotra fanoherana mihamitombo hatrany izy io, ary miantoka ny fitazonana ny fifandraisana voalohany amin'ny fotoana rehetra, ka miteraka vokatra azo antoka miaraka amin'ny MTBF lava.
Mora apetraka tokoa. Ny fidirana amin'ny tariby dia ao ambadiky ny telefaona hisorohana ny fahasimbana artifisialy, raha ny keypad kosa dia mahatohitra ny toetr'andro sy ny vandal.
1.Ny finday Analogue Standard na telefaona SIP dia mety tsy voatery.
2. 304 akorandriaka vy tsy misy fangarony, trano mafonja, tanjaka mekanika avo ary fanoherana mahery vaika.
3. Fandraisana an-tanana manohitra vandalosy sy tadiny mifono vy.
4. Mifanaraka amin'ny fanaraha-maso ny volan'ny ADA.
5. Keypad amin'ny firaka zinc miaraka amin'ny bokotra fanaraha-maso ny volume. Keypad henjana sy maharitra miaraka amin'ny memoire, mora ampiasaina. Ny bokotra 0-9 dia azo zahana ihany koa ho bokotra haingana.
6. Karatra fampianarana: Azo apetraka amin'ity faritra ity ny torolàlana.
7. Fanodinana fametahana andriamby miaraka amin'ny volotara bararata.
8. Misy mikrô-hanafoana ny tabataba azo alaina.
9. Fametahana rindrina, fametrahana tsotra
10. Fiarovana amin'ny toetr'andro: IP55-IP65
11.Connection: RJ11 varotra fantsom-tariby boaty taribyAndalana mandeha amin'ny telefaona na famatsiana herinaratra ivelany na Poe (telefaona SIP)
12.ny loko miloko azo.
13. Ampahany amin'ny finday vita amin'ny telefaona.
14. CE, FCC, RoHS, ISO9001 no mifanaraka.
Herin'aratra Ampidirina ny zotra an-tariby
Ringer Boky ≤80dB (A)
Ambient Temperature -40 ~ + 70 ℃
Haavo fanoherana ny vanim-potoana IK10
Auto Dial marary fanitsiana Institute Industrial Industrial Visitation No-Dial fonja Telephones ho an'ny seranam-piaramanidina -JWAT150
Fandraisana an-tanana manokana ny fonja fiantsoana fonja voafonja manokana-JWAT123
Telefaona marary an-tranomaizina voafonja vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny Dial Pad - JWAT145
habe lehibe An-trano an-kalamanjana indostrialy Stainless Steel Compact analog an-telefaona ho an'ny fonja sy ny voafonja - JWAT147